Taliye Khaliifa Xaftar oo Liibiya dib ugu laabtay - BBC News Somali
Field Marshal Xaftar ayaa waxa uu hogaamiyaa mid ka mid ah isbahaysiyada ugu waaweyn kooxaha hubaysan ee Liibya oo dhul baaxad leh oo dalkaas ka mid ah gacanta ku haya. Rana Jawad ayaa warbixintan soo dirtay.
Labad tododbaad oo uu howlo caafimaad u joogay dalka Faransiiska, ayaa dad badani waxa ay ka walaacsanaayeen in taliyaha milatariga Libya ee uu muranku ka taagan yahay Genral Hiftar ay suuragal tahay in uu kusoo laaban doono Libya iyo inkale. Balse haatan generaalka ayaa haatan dib ugu soo noqday dalkaasi.
75 sao jirkaan oo ku labisan suud, dhoolacadeynayana ayaa kasoo degay galinkii dambe ee maalitii khamiista diyaarad soo caga dhigatay magaalda dhacda bariga Libya ee Bangazi.
Dalka uusan nidaamka ka jirin ee Liibiya doorasho ma ka qabsoomi kartaa?
General Hiftar ayaa warbaahinta laga sii daayay khudbad uu xaaladiisa caafimaad uga waramayay saraakiil sare sarei iyo qaar ka mid ah hogaamiyayaasha qabaailka ee bariga Libya.
Waxa uu sheegay generaalku in cidna uusan ku eedeyneynin hadalada been abuurka ah ee la sheegayay xaaladiisa caafimaad, balse waxa ka digay in kuwa been abuurka sameynaya ay ka jawaabi doonaan arrintaasi.
Waddanka Libya ayaa wali waxaa ka taagan kala qeybsanaan dhanka awoodaha siyaasada, milatariga iyo guud ahaan gobollada ah.
Bilihii lasoo dhaafay, general Khalifa Hiftar ayaa waxa ay beesha caalamku ka qeybgalineysay dadaalada nabadeed ee lagu soo afjarayay colaada ka taagan Libya.